समानुपातिक सांसदः काँग्रेस, माओवादी र राजपाबाट को–को परे ? (सूचीसहित) | suryakhabar.com
Home राजनीति समानुपातिक सांसदः काँग्रेस, माओवादी र राजपाबाट को–को परे ? (सूचीसहित)
समानुपातिक सांसदः काँग्रेस, माओवादी र राजपाबाट को–को परे ? (सूचीसहित)
on: १५ पुष २०७४, शनिबार ११:०८ In: राजनीतिTags: माओवादी र राजपाबाट को–को परे सांसदको सूचीमा(सूचीसहित), समानुपातिक सांसदः काँग्रेसNo Comments
काठमाण्डौ । नेपाली काँग्रेसले प्रदेशतर्फको ७२ जना सांसदको टुंगो लगाएको छ । काँग्रेसको कार्यसम्पादन बैठकले शुक्रबार अबेर राति अन्तिम सूची बनाएर निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिए ।
काँग्रेसले समानुपातिक तर्फ प्रदेश एकमा १३, दुईमा ११, तीनमा १४, चारमा ९, पाँचमा १२, छमा ५ र सातमा ८ सिट जितेको छ।
सन्जा कुमारी दनुवार, लिला सुब्बा, ज्योति सुब्बा, शेखरचन्द्र थापा, सीतादेवी पौडेल, विन्दिया कार्की, नवोदिता कुमारी चौधरी, टंगचन्द्र विश्वास, ओम सरावगी, लोकप्रसाद संग्रौला, प्रतापप्रकाश हाङमाङ, विद्यानन्द चौधरी, चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ,
शिवचन्द्र चौधरी, ओमप्रकाश शर्मा, सरस्वती चौधरी, गीताकुमारी यादव, मन्जुकुमारी यादव, असियादेवी थरुनी, प्रमिलादेवी दास, श्यामपरी देवी, नरेशकुमार यादव, शेखररसिद अली, सल्मा खातुन,
मिलन श्रेष्ठ, राजेन्द्र गुरुङ, न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठ, शान्तबहादुर प्रजा, राधा घले, जीवन डंगोल, विजया श्रेष्ठ, रजनी जोन्छे, राजाराम कार्की, बलराम पौडेल, भीमसेन खत्री, गीता वाग्ले, बिजुला बर्मा, कल्पना नेपाली,
बलदेव शर्मा पोखरेल, निर्मला क्षेत्री, रमा अर्याल, वीरबहादुर राना, भुवनेश्वर चौधरी, पुष्पा थरुनी, माला गोतामे सुनार रुन्धावती दुवे, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, रिना विक, सूर्यमति उपाध्याय, याकुल अन्सारी,
गोविन्द बोहोरा, देवराज पाठक, दिव्यश्वरी शाह, अम्बिकुमारी थापा, उमा वादी, श्यामला राना, कुमारीनन्द बम टेकबहादुर रैका छन् ।
Tags: माओवादी र राजपाबाट को–को परे सांसदको सूचीमा(सूचीसहित)समानुपातिक सांसदः काँग्रेस
रोनाल्डो रियल मड्रिड छोड्न तयार !
१५ पुष २०७४, शनिबार ११:०८